VLP ED Ọkpụkpụ ọla kọpa
Obere profaịlụ electrolytic ọla kọpa nke CIVEN METAL mepụtara nwere njirimara adịghị ike na ike peel dị elu. Ọkpụkpụ ọla kọpa nke usoro electrolysis mepụtara nwere uru dị ọcha, adịghị ọcha, elu dị larịị, ọdịdị mbadamba mbadamba, na nnukwu obosara.
RTF ED Ọla kọpa
Ihe mkpuchi ọla kọpa electrolytic a na -atụgharị azụ (RTF) bụ foil ọla kọpa nke agbagoro n'ọkwa dị iche iche n'akụkụ abụọ. Nke a na -ewusi ike peel nke akụkụ abụọ nke foil ọla kọpa, na -eme ka ọ dị mfe iji dị ka etiti etiti maka ijikọ ihe ndị ọzọ.
Super Ọkpụkpụ ED Ọla kọpa
Ihe mkpuchi ọla kọpa na-adịchaghị ala nke electrolytic ọla kọpa mepụtara site na CIVEN METAL abụghị naanị ịhazi ya na ọkpụrụkpụ foil ọla kọpa, kamakwa ọ nwere njigide dị ala na ike nkewa dị elu, na ihu adịghị mfe ịpụ ntụ ntụ. Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ slicing dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.